नेपाल आज | ओली र प्रचण्डमध्ये अब एक जना प्रधानमन्त्री, एक जना पार्टी अध्यक्ष (भिडियोसहित)
राजनीति भिडियो कुरा: युवाको
ओली र प्रचण्डमध्ये अब एक जना प्रधानमन्त्री, एक जना पार्टी अध्यक्ष (भिडियोसहित)
बिहिबार, २६ असोज २०७४ गते प्रकाशित - Bishow
युवा नेता एवं राजनीतिक विश्लेषक
आगामी १० र २१ मंसिरमा केन्द्र र प्रादेशिक निर्वाचन हुन गइरहेको छ । निर्वाचनका लागि अहिले पार्टीहरु धमाधम उम्मेदवार छनौट गर्न व्यस्त भइरहेका छन् । निर्वाचनकै लागि तीन ठूला दलमध्ये दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल मात्रै नभई चुनावपछि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सहमतिसमेत भइसकेको छ । र, यो सहमतिलाई नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि साथ दिएका छन् । यति मात्र होइन, डा. भट्टराई एमालेको चुनावी चिन्ह सूर्य लिएर चुनावमा होमिने कुरा पनि आएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणसहितको चुनावी तालमेल र त्यसमा नयाँ शक्ति नेपालको साथ र समर्थनले चुनावी तरंग ल्याइरहेको बेला हामीले युवा राजनीतिक विश्लेषक हरिराम रिमालसँग यसै सेरोफेरोमा कुराकानी गरेका छौं । कुराकानीको सम्पादित अंश :
–एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अहिले जस्तो खाले चुनावी तालमेल भएको छ, यो राष्ट्र र जनताको हितमा छ । किनभने यो तालमेल र पछि गर्ने भनिएको एकीकरणले मुलुकमा स्थायी सरकार बन्ने छ । अहिलेको जस्तो ९, ९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने छैन ।
– गएको चुनावमा एमाले र राप्रपाबीच पनि तालमेल भयो । कहीँ कांग्रेस र माओवादी र कहीँ एमाले र कांग्रेसबीच पनि तालमेल भयो । वास्तवमा यी सबै तालमेल अप्राकृतिक थिए । तर, अहिले जसरी एमाले र माओवादीबीच तालमेल गर्ने भनिएको छ, यसमा जसरी नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि जोडिएका छन्, यो तालमेललाई भने अप्राकृतिक भन्न मिल्दैन । एमाले र माओवादीबारे पछिल्लो समय अध्ययन गर्ने हो भने नीतिगतरुपमा त्यत्ति धेरै फरक देखिदैन । नेपालमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरु नयाँ जनवादबाट प्रेरित छन् । गन्तव्य एउटै छ, तर बाटो मात्र बाटो फरक थियो । पछिल्लो गठबन्धनले बाटो पनि एउटै बनाएको छ । एमाले र माओवादी नमिल्नुपर्ने मैले त्यस्तो केही कारण देखेको छैन । यो गठबन्धनदेखि तिलमिलाएका र आत्तिएका शक्तिहरुले मात्र अप्राकृतिक भनेका हुन् ।
अर्काे कुरा, यो गठबन्धन पहिला नै हुनुपर्ने हो । किनभने सैद्धान्तिक रुपमा एउटै आधारमा उभिएका दुई वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरु संसारमा समानान्तर रुपमा कहीँ पनि देखिएको छैन । यो बडो अनौठो कुरा ओ । ६४ सालको निर्वाचनले माओवादीलाई ठूलो पार्टीको रुपमा स्थापित गराएपछि प्रचण्डले अब एमालेसँग मिल्ने कि त एमालेलाई निल्ने कुरा गरेका थिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि एमाले फेरि माओवादीभन्दा धेरै ठूलो पार्टी बन्यो । त्यसबेला पनि एमालेले त्यही नीति अवलम्बन ग-यो । माओवादी अब सकिन्छ भने विश्वास एमालेलाई थियो । अहिलेको स्थानीय निकायसम्म आइपुग्दा अब माओवादी सकिन्छ भन्ने लागिरहेको थियो एमालेलाई । तर यो स्थानीय निर्वाचनले माओवादीलाई मजबुत बनायो । त्यसैले पनि यी दुई पार्टीलाई एकै ठाउँमा उभिने अवस्था खडा गरेको हो ।
–अहिलेको गठबन्धनबाट नयाँ शक्ति नेपाललाई पनि फाइदा पुग्छ । उसको राजनीति दिनप्रतिदिन क्षयीकरण हुँदै थियो । वास्तवमा नयाँ शक्तिले अहिले सेफ ल्यान्डिङ हुने मौका पाएको छ ।
–एमाले र माओवादी गठबन्धनले एउटै चुनाव चिन्हमा चुनावमा गएको भए उसलाई दुई तिहाई बहुमत आउने निश्चित थियो । फरक फरक चुनाव चिन्ह भएकाले दुई तिहाई त अब नआउला, तर बहुमत भने निश्चित छ ।
–चुनावमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले इमान्दारिता देखाएको अवस्थामा यी दुई पार्टीबीच चाँडै नै पार्टी एकता हुन्छ । यो स्थितिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भागबण्डा हुने मैले देखेको छु । दुबै जना यसमा तयार भइसकेको पनि मेरो विश्लेषण छ ।
–चुनावी तालमेल तत्कालका लागि माओवादीलाई फाइदा छ । एमालेलाई घाटा पुगेको जस्तो मलाइ लाग्छ । माओवादी एक्लै लडेको भए उसको खासै धेरै सिट आउँदैनथ्यो । तर, अब माओवादीको धेरै सिट आउने छ । अर्काे कुरा, एमाले एक्लै लडेको भए पनि उसले धेरै सिट जित्ने निश्चित थियो ।
कुरा: युवाको हरिराम रिमाल